Home News Michael Keating oo ku wajahan Baydhabo iyo Fartiin u wado madasha shirka
Michael Keating oo ku wajahan Baydhabo iyo Fartiin u wado madasha shirka
Wakiilka gaar ah ee Qaramada Midoobay Mudane Michael Keating ayaa berito ku beegan magaalada Baydhabo si uu uga qayb-galo gunaanadka shirka ka socda magaalada Baydhabo. Keating oo aan xiriir wada shaqayn fiican kala dhaxeeynin RW Xassan Cali Kheyre ayaa in mudo ah dhaliilsanaa qaab dhaqanka dowlada iyo balan ka baxyadda joogtada ah ee dowlada sameeyso. Keating ayaa waxaa uu doonaa in si gooni gooni ah ula kulmo hogaanka dowlad goboleedyada si uu isugu dayo in la isku soo dhaweeyo.
Laakiin warar hoose oo ay heshay MOL ayaa iyadana sheegaya in Michael Keating rumaysan yahay in sida kaliya ee dib la isugu soo celin karo dowlada iyo dowlad goboleedyadda ay tahay in Xassan Cali Kheyre meesha ka baxo isla markaana dowlad cusub oo la wada-leeyahay oo labada dhinacna ku qanaacsan yihiin la soo dhiso. Qaramada Midoobay uma muuqato sida ay suuragal ku tahay in labada dhinac si qalbi furan ah isugu soo dhawaadan inta Kheyre yahay Ra’sal Wasaare. Qudbadiisa beri waxa ay noqon doonta mid guud mar ah laakiin xanbaarso fartiimo dahsoon. Su’aashu waxa ay tahay Farmaajo ma leeyahay geesinimo uu dadka iyo dalka ku badbaadiyo.